Kedu ihe bụ Boondocks Fun Card? - Magazin ADL ➡
Kedu ihe bụ Boondocks Fun Card?
boondocks onyinye Kaadị mee ka inye onyinye nke fun mfe na adaba. Ọ bụghị naanị na ha dị mma maka ụbọchị ọmụmụ na ndị na-akwa ngwaahịa, ha na-enye onyinye dị ukwuu n'oge ọ bụla n'afọ! Zụrụ gị Kaadị ntụrụndụ ugbua! Anyị ga-eziga ha ozugbo n'ọnụ ụzọ gị n'ime ụbọchị azụmahịa atọ!
N'otu aka ahụ, Gịnị bụ isi ihe omume fun kaadị?
Kaadị ụtọ ihe omume OKWU & OKWU. A Isi ihe omume FUNKaadị na a Ihe Omume Game kaadị (a na-akpọkọta ọnụ ebe a dị ka "kaadị FUN”) bụ uru echekwara kaadị na eriri ndọta nke na-enye gị ohere ịme egwuregwu ma ọlị Ihe Omume Ebe ntụrụndụ na United States ("Ebe(s) na-ekere òkè").
Ọzọkwa, Isi ihe omume nwere oke afọ? Ndị ọbịa n'okpuru afọ nke 18 ga-esonyere nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta na-elekọta afọ nke 25 na mpaghara billiards. Laser Tag na ike ndọda eriri nwere ịdị elu chọrọ nke 48" igwu egwu.
31 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Kedu oge ihe omume bụ isi na-amalite?
Isi ihe omume nwere oge obi ụtọ?
Ị nwere ike iweta nri nke gị na mmemme isi?
Ị ga-edobe ndoputa maka isi emume?
Ị nwere ike iweta nri na mmemme bụ isi?
Isi ihe omume nwata ọ na-eme enyi?
Ego ole ka egwuregwu mmemme bụ isi na-eri?
Isi ihe omume nwere bọọlụ skee?
Olee otú ogige mkpado laser kwesịrị ibu?
Enwere nri na emume isi?
Kedu ihe bụ eriri ike ndọda?
Ebee ka m nwere ike ịkpọ mkpado laser nso m?
Kaadị ụtọ mmemme isi emebie?
Gịnị bụ isi mmemme kaadị fun?
Ego ole bụ emume ncheta ọmụmụ na Isi emume?
Ego ole ka mkpado laser na isi ihe na-eri?
Ogologo oge ole ka egwuregwu mkpado laser dị?
Kedu afọ bụ isi ihe omume hire?
Isi mmemme ọ dị ọnụ?
Ego ole ka ọ na-eri iji gaa bọọlụ?
Isi ihe omume nwere WIFI?
Kedu egwuregwu dị na mmemme bụ isi?
Ego ole ka ọ na-eri iji rịgoro okwute na isi ihe omume?
Ego ole bụ obere gọlfụ na emume Isi?
Ego ole ka ọ bụ nnukwu efere?
Ego ole ka ọ na-eri maka nnukwu efere na Stars and Strikes?
Gịnị ka Isi Omume pụtara?
Mkpuchi ụgwọ-kwa-elele maka ndị isi ihe omume na-amalite na 10 pm ET, na McGregor na Cerrone na-atụ anya ịbanye n'ime octagon n'ihe dị ka elekere 12:15 nke ụtụtụ ET, n'agbanyeghị na ọ bụ kpọmkwem. oge dabere na ọgụ mbụ.
Oge Obi Ụtọ at Ihe Omume! Gaa Ihe Omume n'oge Oge Obi Ụtọ site na 4PM ruo 7PM Sunday site na Tọzdee ma ugbu a site na 7PM - nso! Kporie ndụ billiard n'efu, ihe ọṅụṅụ pụrụ iche na ihe ndị ọzọ! Gaa leta Ihe Omume n'oge Oge Obi Ụtọ site na 4PM ruo 7PM Sunday site na Tọzdee ma ugbu a site na 7PM - nso!
nRI, Ọṅụṅụ & Oyi: Food, ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ndị na-ekpo ọkụ enweghị ike ibubata n'ime nke ọ bụla Ihe Omume Center. Ihe Omume enweghị ọrụ iji nyochaa Ọrụ Nkwukọrịta.
Biko mara, online ndoputa dị maka oge site na awa 2 ruo ụbọchị 45 tupu oge eruo. Dejupụta fọm ngwa ngwa na otu onye otu nọ na ebe ị họọrọ ga-akpọtụrụ iji nyere aka ike otu bọọlụ emume gi agaghị echezọ ngwa ngwa.
nRI, ihe ọṅụṅụ na oyi: Food, enweghị ike ibubata ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe nju oyi n'ime ọ bụla Ihe Omume Center. Ihe Omume enweghị ọrụ iji nyochaa Ọrụ Nkwukọrịta.
Ihe Omume na-enye nnukwu oghere anụ ahụ jupụtara n'ụdị ọdịnala na nhọrọ egwuregwu vidiyo. Ụlọ ọrụ ahụ na-enye bọọlụ, biliard akpa na foosball maka ndị omenala. Ọ baghị uru maka ụmụaka mana ọ bara uru maka ndị isi ha. Ihe Omume nwere ụlọ mmanya zuru oke.
Gaba na Ihe Omume na abalị Mọnde ma nwee ọ enjoyụ na mmemme niile-ị nwere ike igwu egwu ma ọ bụ ebe egwuregwu egwuregwu maka naanị $10.95 kwa ọbịa! Ihe enye is dị irè site na 4pm na-emechi. Nri tinyere arcade egwuregwu – ị na-enweta ụzọ karịa mgbe ịzụrụ ha ọnụ! Ngwakọta ntụrụndụ na nri na-amalite na naanị $17.95!
Ihe Omume Knoxville karịrị naanị 22 ụzọ nke ịgba bọọlụ ọgbara ọhụrụ, eriri ike ndọda, mkpado laser, na egwuregwu karịrị 100.
A na-ahụkarị Mkpado Laser mma chọrọ 3,000-5,000 square ụkwụ. Ngụkọta ohere dị kwesịrị bụrụ ma ọ dịkarịa ala 7,000 square ụkwụ na mkpokọta ụlọ size inye ohere maka ọnụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ịsa ahụ, ọnụ ụlọ, counter counter, ọnụ ụlọ egwuregwu, na ikekwe ihe nkiri ndị ọzọ.
Ị maara enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ zuru oke n'ime ọ bụla Ihe Omume? Chọta nke nri ị hụrụ n'anya a menu nke na-egosi nri grill ọhụrụ nke America, dị ka steak sirloin a ghere eghe nke ọma, salmon teriyaki, salad ubi strawberry, a anụ ezi anụ ezi & cheddar burger na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ụdọ ndọda na-ebuli echiche nke njem gị. Anyị ewerela usoro mgbochi ahụ n'ọkwa dị elu. Ihe karịrị 20 ụkwụ dị elu, ọ bụ kpọmkwem. Na-awụgharị eriri àkwà mmiri, oghere nguzozi akwụsịtụ na eriri siri ike dị elu na-atọ ụtọ karịa mgbe a kwụsịrị gị n'elu ya - na-enweghị ụgbụ.
Mkpado Laser A na-enyocha nke ukwuu n'akụkụ m
Bay Area Discovery Museum. 551 nyocha. Ụlọ ihe ngosi nka ụmụaka, ogige ụbọchị.
Ụlọ ikuku. 514 reviews. Ogige trampoline.
Nnukwu efere mmiri. 395 reviews. Bowling, ụlọ mmanya.
Albany Bowl. 380 reviews.
Omescape - Richmond. 328 reviews.
Ntugharị ahụ. 327 reviews.
Presidio Bowl. 326 reviews.
Omuma Bowling Center. 325 reviews.
na -eri? A na-ewere ngwugwu dị ka nke anyị The Extreme omume, ma Ụbọchị ọmụmụ ngwugwu sitere na gburugburu $15-20 mmadụ.
Isi emume bụ nnukwu ụlọ jupụtara na egwuregwu na ntụrụndụ nke gụnyere ịgba bọọlụ, mkpado laser, ọdọ mmiri (billiard), na egwuregwu vidio. Nke price n'ihi na mkpado laser bụ $5-7 kwa onye na egwuregwu na-adịru ihe dị ka nkeji iri na ise. Ihe dị ka mmadụ iri abụọ nwere ike igwu egwu otu oge.
17 kacha nta afọ na- akwụ ụgwọ.
Ozi ọma: Ntụle gị agaghị adị NA-AGA!
Mbugharị ọ bụla ma ọ bụ mbufe nke a kaadị ga mee ka ọ bụrụ ihe efu ma bụrụ onye a ga-achụpụ. Ihe Omume Ọ bụghị maka furu efu, zuru ma ọ bụ mebie kaadị.
Site na Egwuregwu: $6.50 kwa onye kwa egwuregwu, $4.00 mgbazinye akpụkpọ ụkwụ. Site na elekere: $40.00 kwa elekere kwa uzo.
Netwọk Wi-Fi efu na ekekọrịtara gburugburu Ihe Omume Ntụrụndụ. Nweta ngafe na-atọ ụtọ! $5 maka egwuregwu na-akparaghị ókè omume!
Foto: Main Ntụrụndụ n'okporo ámá Bọọlụ Skee
Ihe nlegharị anya gụnyere bọọlụ ọgbara ọhụrụ, mkpado laser dị iche iche, ebe egwuregwu egwuregwu na-egosi ihe karịrị 100 egwuregwu vidiyo kacha ọhụrụ na ihe ndị ọzọ! Site na mmemme ụbọchị ọmụmụ anyị na-enweghị nsogbu, Ihe Omume na-enye Epic FUN nke ga-ahapụ gị na ncheta na-adịgide adịgide.
Na ihe karịrị 100 arcade egwuregwu, gụnyere mbelata ihe ịma aka jikọrọ egwuregwu vidiyo egwuregwu na oge ochie nke ndụ dịka PAC-MAN® na Galaga, enwere ihe maka onye ọ bụla nọ na ya Ihe Omume arcade. Nweta isi site na ịkpọ họrọ egwuregwu ịgbapụta na Nhọrọ Onye Mmeri.
Na-arịgo abụghị egwuregwu dị ọnụ ala n'ụwa, mana Isi Ihe Omume Ịrịgoro Nkume kere a arịgo mgbatị ahụ dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere gyms ndị ọzọ. Nke ahịa dị n'okpuru: 1/2 Hour = $8.00. Oge elekere = $1.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ihe na-atọ ụtọ, lelee ihe na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke, nke nwere oghere 18. Obere-golf ime Ihe Omume na North Austin. Ebe ntụrụndụ ime ụlọ a na-enyekwa bọọlụ, ịrị elu nkume, mkpado laser na ebe egwuregwu. A gburugburu nke Obere-ego gọlfụ $7 n'ime izu yana $9 kwa onye na ngwụsị izu.
Site na elekere: $25.00 kwa elekere kwa uzo, $3.00 mgbazinye akpụkpọ ụkwụ. Site na Egwuregwu: $6.00 kwa egwuregwu kwa onye, ​​$4.00 mgbazinye akpụkpọ ụkwụ. Site na elekere: $35.00 kwa elekere kwa uzo, $4.00 mgbazinye akpụkpọ ụkwụ.
Sunday Night Na-eme Cents!
Nwee obi ụtọ 99 ¢ Bowling ma ọ bụ $1.99 VIP Bowling Sunday ọ bụla site na 6pm ruo etiti abalị n'oge Sunday Night Na-eme Cents. Ịgbazinye akpụkpọ ụkwụ bụ ọnụ ahịa mgbe niile ($ 4.39 ndị okenye; $ 3.39 ụmụaka 12 & n'okpuru). $2.99 ​​(kwa egwuregwu) Laser Tag BONUS! Oge iji maa ndị enyi gị niile aka na mkpado laser gburugburu (ma ọ bụ abụọ).
Ego ole ka otu nnukwu okwute na -efu?
Kedu ihe bụ 5 n'ime 7 ọkwa?